Sida loo kiciyo loona habeeyo habka habeen ee Telegram | Androidsis
Sida loo isticmaalo loona maareeyo habka habeen ee Telegram
Telegram waa codsi sii wadaya helitaanka Android. Waxay u taagan tahay inay noqoto barnaamij aan awoodno u qaabee si cajiib ah. Maaddaama aan haysanno suurtagalnimada in wax laga beddelo muuqaalkeeda, abuurista mawduucyo u gaar ah. Sida codsiyo badan oo ku saabsan Android, waxaan sidoo kale ka helnaa qaabka mugdiga ah ee arjiga. Xaaladdaada waxaa loo yaqaan 'Night Mode', waana u adeegsan karnaa si fudud.
Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa sida ay tahay waxaad ku isticmaali kartaa habkaan habeenka ah Telegram. Si aan u isticmaalno, waa inaanu kicinaa, marka lagu daro, arjiga farriinta ayaa nooga tagaysa dhawr ikhtiyaar oo qaabayn ah, sida barnaamijka xilliyada ay toos u hawlgalayso.
1 Ku dhaqaaji habka habeenkii Telegram
2 Habeyn habeen dhig
2.1 La qorsheeyay ama la waafajiyay
2.2 Buluug madow ama mugdi ah
Ku dhaqaaji habka habeenkii Telegram
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah u gudub hawlgelinta habka habeen ee Telegram. Sida caadiga ah, dalabku wuxuu noo keenayaa qaabkan la damiyey. Marka isticmaale kasta waa inuu go'aansadaa inuu doonayo inuu u isticmaalo ama uusan ku jirin kiiskooda. Tallaabooyinka lagu dhaqaajinayo waa kuwo fudud. Tani waa waxa aan sameyno:
Fur Telegram ku saabsan casrigaaga Android
Mari liiska menu
Tag qeybta Chat Settings
Halkaa ka hawlgal ikhtiyaarka Habka Habeenkii
Tallaabooyinkan Habeenkii hore ayaa si rasmi ah loogu shaqeeyay arjiga. In kasta oo aan sidoo kale haysanno suurtagalnimada in la qaabeeyo dhowr dhinac oo ka mid ah. Si aad ugu hesho adeegsi aad u badan shaqsi ahaanta barnaamijka.
Sida loo abuuro sheeko qarsoodi ah oo ku saabsan Telegram oo leh farriimo is-dumin kara
Habeyn habeen dhig
Markii aan ku jirno qaybta su'aasha ku jirta ee arjiga, waxaan awoodi doonnaa inaan aragno in naloo soo bandhigay dhowr ikhtiyaar. Telegram wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay qaabeeyaan gaar ahaan habaynkan habeen walba ah. Sidaa darteed, haddii aan ku hawlgalnay doorashadan arjiga gudahiisa, waa inaan tixgelinno dhinacyo taxane ah, si ka wanaagsan u isticmaalkeeda.
La qorsheeyay ama la waafajiyay
Xulashada ugu horeysa ee aan ka heli karno arintaan ayaa ah hadii aan rabno inaan barnaamij ka dhigno firfircoonida habenkaan, ama hadii, si caksi ah, aan door bidno adeegsiga la waafajiyay. Adoo dooranaya ikhtiyaarka jadwalka, Telegram ayaa noo oggolaan doona Dooro waqtiga aan rabno inaan dhaqan galno habka habeenkan, marka lagu daro waqtiga uu shaqada ku joogsan lahaa. Sidaa darteed, isticmaale kasta ayaa dooran kara saacadaha ay u arkaan inay ku habboon yihiin kiiskooda gaarka ah. Waxaan sidoo kale ka dhigi karnaa inay la jaanqaado waqtiga dhabta ah, taas oo ka dhigaysa inay si otomaatig ah u hawlgasho markay tahay habeen.
Haddii ikhtiyaarka la waafajiyay la isticmaalo, waxa la qabtay ayaa ah in qaab habaynkan ah laga dhigo Telegram waxay ku xirnaan doontaa dhalaalka shaashadda. Marka markay jirto boqolkiiba iftiinku wuxuu ka yar yahay midka aan dejinnay, qaabkan waxaa loo isticmaali doonaa barnaamijka farriinta caanka ah. Waa ikhtiyaar kale in laga fiirsado isticmaaleyaal badan.
Sidee si joogto ah looga tirtirayaa koontadaada Telegram
Buluug madow ama mugdi ah
Faahfaahin kale oo Telegram noo ogolaatay inaan doorano waa midabka aan dooneyno in loogu isticmaalo asalka qaabkan mugdiga ah. Barnaamijyo badan oo ku saabsan Android caadi ahaan waxay u isticmaalaan madow ama buluug mugdi ah midabka asalka. Munaasabaddan awgeed, arjiga farriinta ayaa leh labadan midab ee la heli karo, laakiin innaga ayaa ah kuwa dooran kara kiiskan. Haddii aad haysato taleefan casri ah oo leh shaashadda OLED, xulashada madow ayaa kaa caawin kara keydinta tamarta.
In kasta oo mid waliba awoodi doono hubi waxa kuugu habboon adiga. Waxa ugu fiican oo dhan ayaa ah inaysan macno lahayn haddii aan dooranay barnaamijka ama ikhtiyaarka la waafajiyay, kiisaska oo dhan waxaan dooran karnaa midabka aan dooneyno inaan ku isticmaalno barnaamijka kiiskan. Marka, helitaanka isdhexgalka noogu fudud ee aan ku isticmaali karno Telegram, ama midka ugu raaxada badan indhaheenna.
Habka mugdiga ahi wuxuu ka dhigayaa inuu soo galo beta cusub ee WhatsApp
Habka mugdiga ah, halkan waxaa lagu baabtiisay sida habeenkii oo kale, sii wado helitaanka codsiyada Android. Marka waa wax aan arki doonno wax badan mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo isticmaalo loona maareeyo habka habeen ee Telegram
Samsung waxay dib u dhigeysaa soosaarida Galaxy Home ilaa dhamaadka sanadka
Qadka dhexe ee qarsoodiga ah ee Hisense ayaa ka soo muuqday TENAA